Xaaladda muhaajiriinta Giriiga oo laga deyriyay | Baydhabo Online
Xaaladda muhaajiriinta Giriiga oo laga deyriyay
Hay’ad samafal oo laga leeyahay Britain ayaa ka digtay in xaaladaha ay ku nool yihiin dadka muhaajiriinta ah ee ku sugan jasiiradaha dalka Giriiga ay sii xumaanayso, sababtoo ah tirada muhaajiriinta oo aad u soo badatay.
Save The Children ayaa sheegaysa in muhaajiriinta soo gaartay jasiiradaha Lesbos, Chios iyo Samos qeybtii hore ee bishan ay sare u kacday ku dhawaad boqolkiiba 150 markii la barbar dhigo qeybtii hore ee bishii July.
Hay’adda ayaa sheegaysa in muhaajiriinta uu cadaadis ka haysto helidda adeegyada asaasiga ah sida musqulaha iyo biyaha la cabo.
Hay’addu waxa ay doonaysaa in Midowga Yurub inuu hagaajiyo adeegyada asaasiga ah ee xeryaha iyo weliba inay dardargeliso qorshaha dib u dejinta loogu sameynayo qaxootiga rasmiga ah.
Wiil u dhalay ninka daroogada ka ganacsado ee Joaquin Guzman oo loo yaqaano El chapo ayaa kamid ah lix qof oo ay afduubteen burcad iskasoo horjeeda ee magaalada Puerto Vallarta. Dacwad oogayasha Mexico ayaa sheegaya in wilkan oo la yirahdo Jesus Alfredo Guzman ayaa casho cunayay kadib markii burcadan ay maqaaxida soo weeraren oo ay isag afduubteen.